Uwe uwe nwanyi na akwa - akwa, nwa, denim, ogologo, akwa, uwe akacha, uwe, ndi agha, ndi agha na ndi ozo, ndi ozo, ugbua, ikiri ụkwụ
Ikike na jeans - otu esi ahọrọ ma na-eyi n'ụzọ ziri ezi?
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu mgbe ị na-eke ụda nke a mara mma na uwe elu na jeans. Dabere na ihe atụ a họọrọ, ị nwere ike ịchọpụta ma ọ bụ obi ike ma dị elu, ya mere onye ọ bụla fashionista ga-ahụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka onwe ya.
Ụmụ nwanyị na-eji uwe elu 2017
N'oge a, couturier nwere obi ụtọ na ọtụtụ ngwọta nghazi dị iche iche dịka uwe elu na jeans. Iji hụ na isi a dabara adaba n'ụzọ zuru ezu na mbido zuru ezu na ala denim, a na-eji usoro nhazi ndị na-esonụ:
A na-ewere nhọrọ mmeri-emeri dị ka mbipụta n'ime ụlọ, ọ nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ buru ibu;
otu ngwọta kachasị mma ga-abụ warara;
Ịkwanye ego ga-eme ka ngwaahịa ahụ dị mma ma nye ya ntụgharị;
elu nwere ike ịgbakwunye na ruffles ma ọ bụ flounces, nke ga-eme ka yabasị nwanyị na ịhụnanya;
Enwere ike ịme ụta na-emepụta site na iji nchikota dị otú ahụ dịka uwe elu na jeans. A na-ekwe ka ọnụ ọgụgụ dị otú a na-ekwe ọbụna maka njem gaa n'ọfịs;
iji mee ka agba chaa chaa na-acha ọkụ juru na mpempe akwụkwọ ga-enyere aka;
Oge a na-ejikwa nchịkọta na-akpali agụụ mmekọahụ ma nke ukwu ma nke ala, nke denim. N'okwu a, a ghaghị ịbịaru nlezianya ịhọrọ ihe ndị e ji ekpuchi ákwà;
a nabatara multilayeredness na asymmetry.
Kedu otu esi ahọrọ uwe elu maka jeans?
Iji mee ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma, ọ dị oke mkpa ịṅa ntị na nhọrọ ziri ezi nke ihe eji akwa ákwà. A na-eme nhọrọ nke ihe nlereanya na-atụle njirimara nke ọnụ ọgụgụ nwanyị, nke a na-atụ aro ka ọ buru n'uche oge ndị dị otú ahụ:
nwa agbọghọ na jeans na uwe elu. Ọpụpụ ahụ ekwesịghị ịdị mkpụmkpụ, ụdị a ga-abụ ndị inyom dị elu;
ndi nwere oke ugbo kwesiri igbokwasi uwe ejiji;
A na-eyiri uwe ndị nwere ezigbo ákwà dị mma na-eyikwasị ma na-eyiri ha ma ọ bụ pụta;
A na-eyi ụdị na ejiji na n'akụkụ ya ka ngwaahịa ahụ wee dị nchara. N'otu ụdị ahụ, ụdị ndị a ga-ele anya dị mma;
Mgbe ị na-ahọrọ n'elu na ala nke uwe ahụ, a ghaghị ịkwanyere nguzozi ahụ: naanị otu n'ime ihe ndị a kwesịrị ịbụ nnukwu. Egwuregwu dị mma ga-ejikọta ihe ndị a na- agbanye na ya , a ga-agbatịkwa uwe elu ahụ.
Ọ kwesịrị m ịkwanye uwe m na jeans?
Otu n'ime ajụjụ ndị kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ụdị uwe dị otú ahụ bụ otu esi esi tuo uwe elu n'ime nwa agbọghọ jeans? Iji lee anya ma mara mma, na-eyiri uwe elu ma ọ bụ na-ahapụ ya, ọ dị mkpa ịgbaso nduzi dị otú ahụ:
akuku elu nke elu a ga-ejikọta ya dị ka uwe mmiri dị warara.
na-eyiri uwe elu dị ogologo nke nwere uwe elu ma ọ bụ nke a kpochapụrụ;
A ghaghị eyi uwe akwa nke akwa akwa akwa, tinye ya n'ime.
Kedu otu esi eji uwe na jeans nye nwa agbọghọ?
E nwere ọtụtụ nhọrọ, dịka uwe elu e ji n'okpuru jeans. Ihe niile na-adabere n'ụdị ngwaahịa ahụ, atụmatụ nke ọnụ ọgụgụ a ma ọ bụ nwa agbọghọ ahụ. Mgbe ị na-ahọrọ ihe ndị e ji eji ejiji na-echeba oge ndị dị otú ahụ na-enyere aka idozi nsogbu nke otu esi eji uwe na jeans:
Nhọrọ nke agba - stylists kweere na ọ dịwo anya ejiji iji họrọ ngwaahịa na ụda. Ha kwesịrị iche iche na ntanya, ma ọ bụrụ na ha na-eme ụdị atụmatụ ahụ. Echiche a na-enweghị atụ na-ele ihe ndị dị iche na ibe ha, dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịcha ọbara ọcha.
Iji kee ụta mara mma, a na-eji ejiji mara mma, ụmụ nwoke ahụ ga-enwe nkwekọ zuru oke na ejiji egwuregwu.
Na na na jeans
Otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu na-etinye akwa sọks bụ itinye uwe elu ụmụ nwanyị n'okpuru uwe. Na mgbanwe dị otú a, ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma karịsịa iji uwe elu ndị dị otú a:
nwere mbipụta n'ime oghere ma nwee ọdụ nwoke. E wezụga bụ "onyinyo" oyiyi, mgbe akụkụ kachasị elu nwere ike mezue;
Ogologo oge, karịsịa na ogologo oge;
nwere ihe dị n'akụkụ nke uwe na jeans;
enwegharịrị ọnụ n'akụkụ ala.
Uwe ogologo na jeans
Enwere ike ịme nkasi obi na ejiji ejiji na-eji ejiji nwanyi nwere uwe elu nwere ihe elongated. Maka nchikota a, njirimara njirimara bu njirimara:
n'okpuru uwe elu nwere ike ịdị mma ma ọ bụ na-adịghị mma: obere karịa n'ihu na ogologo site n'okpuru;
ogologo nwere ike ịdị n'elu ikpere, iru ha ma ọ bụ ọbụna bụrụ ndị dị ala, n'ọnọdụ ọ bụla, uwe elu na jeans ga-enye anya dị mma;
ihe dị iche iche maka nchikota ga-abụ akpụkpọ anụ, na ihe nlereanya na-eji "akpa akpa" na ọkpụkpụ a na-agbanye aka.
Jeans na akwa akwa denim
Otu ihe na-emeri emeri bụ otu uwe elu, eji akwa akwa ma ọ bụ denim ejiji nke denim. N'okwu a, ụdị uwe ọ bụla dị mma, dịka ọmụmaatụ, ọdịiche dị otú ahụ:
ihe na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nke dị n'elu na ala nke oji ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ;
elu ojii na ala ala;
elu na-acha uhie uhie na njiri ala na-acha anụnụ anụnụ.
Uwe elu a dị irè na ihe dị nro, ọ na-enyocha anya na nke mbụ, ga-eji ikwesị ntụkwasị obi jee ozi ruo ọtụtụ afọ. Na cardigans ya , sweaters na pullovers jikọtara ya, ị nwere ike ịhọrọ jaket tweed na obere ogige. Ihe oyiyi dị otú ahụ ga-abụrịrị ọnọdụ na ọdịda ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi. Iji nweta ihe oyiyi na-adọrọ mmasị, ị kwesịrị ị na-atụle ihe niile: ọdịdị na ogologo nke ngwaahịa ahụ, uwe aka, ụdị akwa, akwa akwa.
N'iji akwa eji akwa akwa, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ njikọ, n'etiti nke ị nwere ike depụta ihe ndị a:
Grunge oyiyi, ma ọ bụrụ na ị tụnye uwe gị n'elu uwe elu gị;
n'ihi na a na-atụ aro ka eyịm kwa ụbọchị na-ahọrọ akwa jeans na uwe elu maka ụda ụda karịa ụra. Echiche ga-ele anya uwe ojii na jeans;
na-aga oriri, ọ ka mma ịnye ụdị nhọrọ dị mma, na mpempe akwụkwọ;
Maka ngwa ngwa, eriri akpụkpọ anụ na sneakers na-acha ọcha naanị zuru okè na-akwado oyiyi ahụ.
Ikike na jeans - nwanyi
Ọ bụrụ na ịhọrọ ihe ndị dị ka jeans na uwe elu, ihe oyiyi maka nwa agbọghọ ahụ nwere ike ịmepụta n'ọtụtụ ọdịiche:
ụdị nkenke ma ọ bụ nke dabara adaba na-enye gị ohere ịmepụta ihe dị nkenke na nke zuru oke, nke kwesịrị ekwesị maka ọfịs ahụ;
na ụdị ejiji nke ndị inyom mara mma ma ọ bụ ndị mara mma , kwa, enwere ebe. Uru ndị dị na ya bụ ihe dị mma, dị irè, ụdị dị iche iche;
Ngwaahịa nwere mbipụta n'ime oghere ga-enyere aka ịmepụta ụda na-adabaghị adaba n'ụdị mba;
Iji agba na nchapụta na-egbukepụ egbukepụ ga-eme ka ngwaahịa ahụ ghara ịga ebe ọzọ.
Ndị na-agba ịnyịnya na uwe elu
Otu n'ime ụlọ ọrụ na-aga nke ọma nke e gosipụtara na podiums bụ ejiji, uwe na akwa sneakers. Mgbe ị na-eke ụda egwu ị nwere ike ịgbaso ndụmọdụ ndị a:
akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịhọrọ ụcha ọ bụla, ebe anya kachasị mma bụ uwe elu nke na-ejigide jeans;
ụmụ agbọghọ ịmepụta ihe dị ka mkpụrụ osisi a na-emekarị ka ọ dị mma ịkwanye n'elu egwuregwu na ndị enyi nwoke;
a nwere ike ịmecha uwe elu ma ọ bụ ihe atụ na ọnụ ọnụ nwere ike ịhọrọ na eyi;
nhọrọ kachasị mma ga-abụ ngwaahịa nke ịkpụcha ihe dị mma nke nwoke, ma ọ bụ nke elongated, ma eleghị anya ịkpụcha ya.
Uwe elu akwa na akwa ụkwụ
Na-agbakwunye ihe oyiyi nke ikiri ụkwụ, n'ụdị a, ị nwere ike ịpụta na nnọkọ, ụbọchị ma ọ bụ na ọfịs. Njikọ ndị na-esonụ nwere ike:
ị nwere ike ịme ụda mgbede nke ọma, karịsịa ma ọ bụrụ na ị họrọ dịka ngwa ngwa ncha. A ga-ahọrọ akụkụ elu dị ọcha ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ dị mkpa, na nchara akwa, acha anụnụ anụnụ;
n'ihi na ọrụ na-adabara yabasị ọzọ - akpụkpọ ụkwụ, elu ụkwụ, dị mfe na monophonic n'elu;
Pants mara mma jikọtara ya na ụdị ejiji ọ bụla, ya mere uwe a kwesịrị ekwesị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla;
ọ bụrụ na achọrọ gị, ị nwere ike ịmebisi yabasị nke na-acha anụnụ anụnụ, uwe elu ọcha na uwe elu na-enweghị aka na usoro ihe atụ, nke ị nwere ike ijikọta eriri, nke bụ eziokwu karịsịa na ụbọchị ọkụ;
Maka oge ọkọchị, uwe elu nwere obere aka na jeans na-adabara n'ụzọ zuru oke;
ọ bara uru ịnwale ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-etinye n'ụgbọ mmiri na uwe mgbochi dị warara nke denim, nkwonkwo zuru okè maka uwe elu ma ọ bụ warara. Foto a bụ ma obi ike na sexy n'otu oge ahụ.
Ekike jeans na akpụkpọ ụkwụ
A na-eji ihe mgbakwunye ejikere maka mgbụsị akwụkwọ na ọbụna oyi nwere ihe ịga nke ọma na akpụkpọ ụkwụ. Ụdị dị otú a nwere ihe bara uru na ụdị. Ụdị ọdịiche dị iche iche nke ihe ndị e ji akwa uwe na-anabata:
ọ ka mma ịchọta ákwà nkedo siri ike iji tuba ha n'ime akpụkpọ ụkwụ;
Uwe elu ahụ nwere ike ịdị, dịka na nnukwu oghere uhie, na nnukwu anụ. N'elu ị nwere ike ịbị akwa jaket ma ọ bụ waistcoat;
otu ikuku ụlọ ọrụ dị egwu ga-emepụta jeans na uwe elu ndị inyom;
Akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịbụ aja aja ma ọ bụ nwa, n'elu ma ọ bụ n'okpuru ikpere.
akpụkpọ ụkwụ na -ejikarị ụdị ihe dị otú ahụ dabara, kamakwa akpụkpọ ụkwụ, karịsịa na akụkụ dị elu nke ọkwá na-acha odo odo.
Ụcha agba - ụcha ụdị okpomọkụ
Kedu ndị enyi nwoke jeans?
Kedu otu esi achọta ụdị gị na uwe?
Bohho maka zuru oke
Kedu ihe ị ga-eyi akwa aja aja?
Dee "rectangle" - ihe ị ga-eyi?
Chastushki banyere Shrovetide maka ụmụaka
37 ụzọ kacha mma iji photlose na enyi nwanyị
Onyinye maka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọkwọ ụgbọala
Kuki obere - uzommeputa
Na-enye nne mama ya n'ụbọchị ọmụmụ ya
Ciara na Russell Wilson mere ememe mmiri ozuzo na Serena Williams
Cinnamon na mmanụ aṅụ maka ụkọ ọnwụ - ụbọchị ole ka ị ga-aṅụ?
Ihe mgbochi si na akwụkwọ ahụaja
Kedu otu esi eri nri na mgbụsị akwụkwọ?
Jam si udara plums
Akpụkpọ ụkwụ na nkume
Kedu ka a ga-esi kwụnye ụgwọ ego ụmụaka?
Rational psychotherapy - ụdị na usoro
Melania ụda na Japan: ileta ụlọ ahịa mma na ide ihe ederede na ụlọ akwụkwọ
Site na achịcha kvass ị nwere ike ida ibu?
Ihe nkedo maka otu ubu